HOCD: လိင်တူဆက်ဆံသူ OCD နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Orientation OCD - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
comments: ဤဆောင်ပါး ဆရာဝန်ဖြေဆိုခြင်းမေးခွန်းများကိုနှင့်အတူတက်ကြွစွာမှတ်ချက်အပိုင်းရှိတယ်။ ကမှတ်ချက်အပိုင်းများတွင်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပင်သောအခါ, ထိုအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းမဆိုဆွေးနွေးမှုကိုရှောင်သတိပြုပါ။ သူမြားကိုစွဲလမ်း (အင်တာနက်ညစ်ညမ်း) မှထိတွေ့မှုကုထုံးအလုပ်သမားတန်ပြန်လိမ့်မည်။
ဧပြီလ 12, 2012 တွင်အတွက် OCD, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ, "သန့်စင်သောအို" ရောဂါလက္ခဏာများစတီဗင်ဂျေ Seay, Ph.D ဘွဲ့ကိုအားဖြင့်
ခံဂေး (ငိုကြွေးနေသောကောင်ကလေး OCD / HOCD) ၏ကွောကျရှံ့ခွငျး
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိင်နားလည်ရန်လေ့လာသင်ယူဖို့အပြင်, လိင်တူချစ်သူဆယ်ကျော်သက်ဖြောင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာမကျမည်အကြောင်းရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေများနှင့်ဖိအားသွားလာရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအစအယူအဆမိဘများ, သူငယ်ချင်းများ, တခါတရံလိင်အကြောင်းကိုမတူညီသောအမြင်များကိုကိုင်ထားသူကိုတခြားသူတွေနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။ စိုးရိမ်စိတ်, ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုမကြာခဏဤလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဒီ post လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူသို့မဟုတ် "အထဲကလာမယ့်" ဒါပေမယ့်အစားလိင်တူဆက်ဆံ OCD ( "HOCD"), တစ်ဦးချင်းစီ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကသာသက်ရောက်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါဆြေးြေိံးနှင့်အတူဆက်စပ်စိုးရိမ်စိတ်အကြောင်းကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ HOCD ဆယ်ကျော်သက်မှထူးခြားသောမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်မည်သည့်အသက်အရွယ်မှာဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
လိင်တူဆက်ဆံ OCD ( "HOCD") ၏တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်မျိုးကွဲတစ်ခုဖြစ်သည် obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD) ကြောင်းမှုများထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ obsessive နှင့်တဦးတည်းရဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့အကြောင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောသံသယပါဝငျသညျ။
လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်. လိင်တူဆက်ဆံ OCD အတွေ့အကြုံကို obsessive စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့အတူဖြောင့်တစ်ဦးချင်းစီ။ သူတို့ရဲ့ HOCD obsessive မကြာခဏမလိုချင်တဲ့အတှေးအထားရှိရေး Impulses သတင်းပို့ထိန်းအကွပ်မရှိဝိညာဏ်သို့ pop ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်ပုံရိပ်တွေ။ သူတို့ရဲ့ obsessive အားဖြင့်အပေါ်ယူဆောင်အဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုလျှော့ချရန်, HOCD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ "သူတို့စစ်မှန်တဲ့လိင်သက်သေ" သို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူဖြစ်လာ၎င်းတို့၏ရိပ်မိ "အားနည်းချက်" လျှော့ချအာရုံစိုက်ကြောင်းထုံးတမ်းအမျိုးမျိုးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ obsessive ထို့အပြင် ( "လမျးဖွောငျ့ OCD") ဖြောင့်ဖြစ်လာ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်. ကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်လာပေမည်သူကိုလိင်တူချစ်သူယောက်ျား, လိင်တူချစ်သူများ, ဒါမှမဟုတ် OCD နှင့်အတူရိုးရိုးတစ်ဦးချင်းစီ, ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဤအထင်ရသောဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ obsessive မှီဝဲသောဘုံဒြပ်စင်ဦးတည်းရဲ့အထူးသဖြင့်ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းအပေါ်အခြေခံပြီး, မလိုချင်တဲ့မညီကြောင်း, သို့မဟုတ် "လက်မခံနိုင်" တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆွဲဆောင်ခံရကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်။ ရိုးရှင်းများ၏ဘို့အလိုငှါ, ငါသည်ဤပို့စ်တွင် HOCD-ဗဟိုပြုဘာသာစကားကိုသုံးပြီးပါလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျး, တူညီတဲ့အခြေခံဒြပ်စင်သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်အကြောင်းကိုစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးသံသယနှင့်အတူလူအားလုံးကိုတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ဖြစ်ကြသည်။
HOCD ရှိသူများသည်အတိတ်ကာလကသူတို့၏လိင်မှုကိစ္စကိုသံသယမဖြစ်သော်လည်းလျှို့ဝှက်စွာလိင်တူချစ်သူဖြစ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူဖြစ်လာနိုင်လိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်ကြသည်။ HOCD မစတင်မှီကသူတို့သည်လိင်ဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယအနည်းငယ်သာရှိခဲ့ပေမည်။ လိင်တူဆက်ဆံသူများပြားသော OCD ရှိသူများသည်လည်းအတိတ်ကာလကလိင်ကွဲဆက်ဆံမှုများခံစားခဲ့ရသည့်သမိုင်းရှိသည်။ ပထမဆုံးမလိုချင်သောအတွေး“ ပေါ်လာ” ပြီးနောက်မှသာသူတို့သည်လိင်တူချစ်သူဖြစ်ရန်အလားအလာနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်လာကြသည်။ ဒီမလိုလားအပ်တဲ့အတွေးတွေပေါ်ပေါက်လာတာနဲ့အမျှသူတို့ဟာလိင်တူချင်းချစ်သူတွေဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှတ်အသားကိုသံသယဝင်စေပြီးယခင်အတွေ့အကြုံများကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်စေပါတယ်။
လိင်တူဆက်ဆံသူများ၌လိင်တူချင်းချစ်သောလိင်တူချင်းဆက်ဆံသူများမှသူတို့သည်လိင်တူချစ်သူမဟုတ်ကြောင်း“ သေချာ” သိလိုကြသည်။ သို့သော်ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းများအရ OCD အားပိုမိုခိုင်မာစေပြီးအားဖြည့်ပေးသောကြောင့်ဤကြိုးပမ်းမှုများသည်နောက်ဆုံး၌နောက်ဆုတ်သွားစေသည်။ ရလဒ်မှာ HOCD ရှိသူအချို့သည်အလွန်အမင်းမသန်စွမ်းမှုများဖြစ်လာသည်။ ရောဂါလက္ခဏာပြမှုများကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်လိင်တူဆက်ဆံသူ OCD ရှိသူများသည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ကျောင်းထွက်ခြင်း၊ အလုပ်ထွက်ခြင်း၊ ဆက်ဆံရေးရပ်စဲခြင်းသို့မဟုတ်ဝိရောဓိအရသူတို့၏လက္ခဏာများပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အခြားဘဝကိုပြောင်းလဲစေသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းသည်အဆန်းမဟုတ်ချေ။
လိင်တူဆက်ဆံဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လိင်ကွဲအကြောင်းကိုသံသယလိင်တူချစ်သူလူနေမှုချမှတ်နှင့်အတူ HOCD စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူအချို့သောကိစ္စများတွင်တစ်ဦးချင်းစီ။ ဒါဟာသံသယ "ကိုထုတ်လာ", သူတို့ရဲ့လက်ရှိအိမ်ထောင်ဖက် / မိတ်ဖက်စွန့်ခွာဖို့သူတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနှင့်ရက်စွဲတူညီလိင်တစ်ဦးချင်းစီမှစတင်။ သို့သော်လိင်တူချစ်သူများနှင့် "ထွက်လာ" နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတွေ့သူကိုလိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေမတူဘဲအတွက် HOCD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ, သူတို့ရဲ့အသစ်သောအသက်တာကိုဒုက္ခခံစားခဲ့ရရှာတွေ့ရှုတ်ထွေးခြင်း, မကျေနပ်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်မိမိတို့၏လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သံသယများနှင့်မသေချာမရေရာတွေ့ကြုံခံစားဖို့ဆက်လက်။
လိင်တူဆက်ဆံ OCD ပုံမှန်အားဖြင့်အပြိုင်သော Element ရှိပါတယ် စစ်ဆေးနေ, ညစ်ညမ်းမှုများနှင့် စင်ကြယ်သောအို OCD။ HOCD ရှိသူအချို့သည်အများအားဖြင့်ရှိသည် OCD ၏စစ်ဆေးနေ-related မူကွဲ။ လိင်တူချင်းတစ် ဦး ချင်းစီကိုလှည့်ပတ်တဲ့အခါသူတို့ကသူတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုလိင်စိတ်နိုးထမှုကို“ စစ်ဆေး” သည်။ လိင်တူဆက်ဆံသူများနှင့်လိင်တူချင်းချစ်သူများသည်လိင်တူချင်းဆက်ဆံမှုနှင့်ဆက်နွယ်သော HOCD အမျိုးအစားရှိသည်၊ လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများ၊ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုပြုသည့်လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူများ၊ လိင်တူဆက်ဆံသူများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူများကို“ ကူးစက်ရောဂါ” ဖြစ်စေ၊ အခြားသူများကတော့မလိုချင်တဲ့လိင်စိတ်ဆန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအပေါ်ပြုမူတာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်။ သူတို့ကသူတို့လိင်တူချစ်သူတွေဒါမှမဟုတ်လိင်တူချင်းလိင်တူချစ်သူတွေကို ၀ ိုင်းရံထားမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာထိန်းချုပ်မှုကိုဆုံးရှုံးပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအရေးယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့စိုးရိမ်နေကြတယ်။ HOCD ရှိသူအချို့ကအခြားသူများကသူတို့ကလိင်တူချစ်သူလို့ထင်ကြလိမ့်မည်၊ သူတို့က“ ဖြောင့်မတ်စွာလုပ်ဆောင်ရန်” ကြိုးစားခြင်းနှင့်အချိန်နှင့်ခွန်အားများများကုန်လွန်ခြင်းများကိုစိုးရိမ်သည်။ HOCD ရှိသူများစွာသည်အထက်ပါရောဂါလက္ခဏာများအားလုံးကိုတွေ့ကြုံခံစားကြရသည်။
အဘယ်အရာကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ obsessive ထိန်းသိမ်းထား? OCD မဆိုပုံစံကဲ့သို့ပင် HOCD လက္ခဏာတွေ, ပျက်ယွင်းနေယုံကြည်ချက်အားဖြင့်ထုံးတမ်းထိန်းသိမ်းထားကြသည်နှင့် ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူတွေ။ လိင်နှင့်လိင်တိမ်းညွတ်အကြောင်းကိုပျက်ယွင်းနေယုံကြည်ချက် OCD-related compulsive ခုခံ၏ဖြစ်နိုင်သောအကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ရှည်။ အခါတိုင်းတစ်ဦးမလိုချင်တဲ့အတွေးကိုရှောင်ရှားသို့မဟုတ်ဘက်, ကအားဖြည့်နေသည်နှင့်အနာဂတျမှာနောက်တဖန် activated ဖြစ်လာဖို့ပိုဖွယ်ရှိဖြစ်လာသည်ကို ထောက်. ဤသည်အန္တရာယ်ရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ထုံးတမ်းအရှင်နောက်ဆုံးတွင်ထိုအမလိုချင်တဲ့အတှေးအကြိမ်နှုန်းနှင့်ပြင်းထန်မှုအတွက်လျော့နည်းကျဆင်းစေမယ်လို့မှန်ကန်သောသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံများ၏ဖြစ်ပျက်မှုတားဆီး။
လိင်တူဆက်ဆံ OCD နဲ့ဆက်စပ်ထုံးတမ်းများပါဝင်သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုံးတမ်း နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာထုံးတမ်း။
လိင်တူဆက်ဆံ OCD စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုံးတမ်း
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခြင်း, "ငါလူတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေသလား?" (မကြာခဏဆန့်ကျင်ဘက်လိင်များနှင့်အတူတူပင်လိင်တစ်ဦးချင်းစီနှစ်ဦးစလုံးမှလျှောက်ထား) ။
တဦးတည်းရဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ ( "ကျနော်ကျိန်းသေဖြောင့်တယ်") အကြောင်းကိုအားရစရာမိမိကိုယ်မိမိ။
စိတ်ပိုင်းဖြောင့်သောလူ vs. လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေ (သို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူများ) အားကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။
"ကို reset" သို့မဟုတ်မလိုချင်တဲ့အတှေး (ဥပမာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဝတ်လျှော်ထုံးတမ်း) ထောင်ဖို့ဒီဇိုင်းကတခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုံးတမ်း။
ယခင်ဆက်ဆံရေး (သင်လိင်တူချစ်သူခဲ့ကြသည်စဉ်းစားသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်မှဆက်စပ်မဟုတ်ခဲ့သေချာစေရန်) ပျက်ကွက်အဘယ်ကြောင့်ထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေ။
အဘို့အစီစဉ်များနှင့်သင် "မှထွက်လာ" သို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူဆက်ဆံရေးရှိသည်ရန်ဆန္ဒလုံးဝမရှိပေသော်လည်း "ထွက်လာမယ့်" ၏အပေါငျးတို့သဖွယ်ရှိအကျိုးဆက်များထားချက်အရ။
အတူ "လိင်တူချစ်သူအတွေးများကို" Neutralizing "ဖြောင့်အတွေးများကို။ "
လိင်တူချစ်သူဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ကလူကိုသိရှိနိုင်ဖို့ပတ်ဝန်းကျင် scan ဖတ်။
မလိုချင်တဲ့အတှေး (ဥပမာမလိုချင်တဲ့အတှေးအရှိခြင်းသည့်အခါမိမိကိုယ်ကိုနေမကောင်းရတဲ့သို့မဟုတ်အန်စိတ်ကူးယဉ်) မှမိမိကိုယ်ကိုဝေးကှာသှားဖို့ဒီဇိုင်း "မှော်" ထုံးတမ်း။
သာယာသောအတိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုပြန်လည်သုံးသပ် / ပြန်ခေါ်ခြင်းဖြင့်မလိုလားအတှေးအထဲကပြေးထွက်လု။
HOCD ထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့်အပြုအမူများ (အမူအကျင့်)
(ကိုလည်းစိတ်ပိုင်းရိုးရာဓလေ့ဖြစ်နိုင်သည်) arousal ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိမိတ်လက္ခဏာကိုတဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်စစ်ဆေးခြင်း။
နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦး (အမျိုးသမီးတစ်ဦးလျှင်) အလွန်အမင်းပုလ် (ကလူကိုပါလျှင်) သို့မဟုတ်ဣတ္လမ်းအတွက် Walking "ဖြောင့်ပေါ်လာပါသည်။ "
"သင့်လျော်စွာ" ပုလ်သို့မဟုတ်ဣတ္သည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. သာပြောနေတာ။
အဝတ်လျှော်ထုံးတမ်း (လက်, etc) တဦးတည်းလိင်တူချစ်သူယောက်ျား, လိင်တူချစ်သူများ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဆက်အသွယ်သို့ကြွလာလျှင်။
"? အဲဒါကိုသာမန် Is ... " အခြားမေးမြန်းခြင်း - ရန်ကျော်နှင့်ကိုကျော်နောက်တဖန်အမျိုးအစားမေးခွန်းများကို အာမခံရယူ.
ထပ်တလဲလဲဟောင်းမိန်းကလေး / သငျ့ဆကျဆံရေးအဆုံးသတ်ဘာဖြစ်လို့ရည်းစားကိုတောင်းဆိုနေတာ။
တဖြောင့်သည်နှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ဆွဲဆောင်နေသည် "သကျသပွေ" ကိုအလွန်အကျွံချိန်းတွေ့။
တဦးတည်းဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ဆွဲဆောင်ကြောင်း "သက်သေပြ" ဖို့အလို့ငှာဖြောင့်ညစ်ညမ်းမှ compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ။
လိင်တူချစ်သူလူဦး, ရန်လိုစော်ကား, ဒါမှမဟုတ်မလေးစားသောလမ်းအတွက်အပြန်အလှန်။
ဒါကြောင့်မလွှဲမရှောင်လိုကခံစားဘာလို့လဲဆိုတော့အချို့ကိစ္စများတွင်, (ကြောင့် OCD သံသယရန်) တစ်ဦးလိင်တူချစ်သူလူနေမှုပုံစံစတဲ့ချမှတ်။ သို့သော်စိတ်ပျက်စရာများနှင့်မလိုချင်သောဒီလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဖြစ်လေသည်။
လိင်တူဆက်ဆံ OCD ရှောင်ရှားအပြုအမူ
လိင်တူချစ်သူယောက်ျား, လိင်တူချစ်သူများ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးလူများကထိမိခဲ့ကြသောအရာရှောင်ကြဉ်ခြင်း။
တူညီတဲ့လိင်တစ်ဦးချင်းစီ (လက်ဆွဲ, ပွေ့ဖက်) နဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း။
ဆွဲဆောင်မှုအတူတူလိင်တစ်ဦးချင်းစီ featuring ဆွဲဆောင်မှုအတူတူလိင်တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများ / ရုပ်ရှင်ကိုရှောင်ရှား။
ကျပုံစံပုလ် (လူတလျှင်) သို့မဟုတ် (အမျိုးသမီးတစ်ဦးလျှင်) ဣတ္မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများရှောင်ရှား။
([ယောက်ျားများအတွက်] ပန်းရောင်ဝတ်ထားဥပမာ) တစ်ဦးကျပုံစံပုလ်သို့မဟုတ်ဣတ္လမ်းအတွက်ဆေးထည့်။
လိင်တူချစ်သူသရုပ်ဆောင်များကိုသို့မဟုတ်ဇာတ်ကောင် featuring လိင်တူချစ်သူတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်အားဖြင့်ဂီတကိုရှောင်ရှား။
လိင်စဉ်အတွင်း "၌အလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်" မလိုချင်တဲ့အတှေးကိုကြောက်ရွံ့ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရှောင်ရှား။
အများပြည်သူအတွက်တူညီတဲ့လိင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ပေါင်ခြံ, backside, ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘတ်ဒေသများမှာရှာဖွေနေကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခါ။
လိင်တူချစ်သူဇာတ်ကောင်သို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူ themes များနှင့်အတူတီဗီရှိုးတွေကိုရှောင်ကြဉ်။
ခရမ်းရောင်ပစ္စည်းများ, Rainbow နှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်အခြားသင်္ကေတများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း။
androgynous သို့မဟုတ် flamboyant အဝတ်အစားကိုရှောင်ရှား။
လိင်တူဆက်ဆံ OCD Maladaptive ယုံကြည်ချက်
ငါ 100% ဖြောင့်ဘူးဆိုပါကကျွန်မလိင်တူချစ်သူပေါ့ဆိုလိုသည်။
ငါသည်ငါ့တပ်မက်လိုချင်သောတိမ်းညွတ်နှင့်အတူကိုက်ညီမှုင်တဲ့အတွေးရှိပါကကြောင့်ငါ "ကူး။ " တော့အဓိပ်ပာယျ
လိင်စိတ်နိုးထ Feeling ငါသည်ဤပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံချင်ကြောင်းဆိုလိုရပါမည်။
ကြှနျတေျာ့လက်ရှိမိတ်ဖက်ငါသည်ဤအတှေးအရှိခြင်းခံခဲ့ရထွက်ရှာတွေ့ပါက,်/ သူသည်ငါ့ကိုစွန့်ခွာချင်ပါတယ်။
HOCD ၏ကုသမှု (ငိုကြွေးနေသောကောင်ကလေး OCD)
"ဘာဒီ OCD မပါလျှင်? ဤရွေ့ကားသင်သည်သင်၏ကုထုံးနှင့်အတူဆွေးနွေးရန်ဆန္ဒရှိအံ့သောငှါအရေးကြီးသောမေးခွန်းများကိုများမှာအဘယ်အရာကိုငါတကယ်လိင်တူချစ်သူပေါ့လျှင်? "။ သငျသညျ HOCD ရှိပါက, သင့်လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သံသယသင့်ရဲ့အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်နဲ့ဘာမှရှိပါတယ်တစ်ခု OCD-related "မှားယွင်းသောနှိုးဆော်သံ" ရောင်ပြန်ဟပ်။ သငျသညျလိင်တူချစ်သူရောက်နေတယ်ဆိုရင် (သင် "မှထွက်လာမယ့်" ၏လူမှုရေးဂယက်ရိုက်ခတ်မှုတွေအကြောင်းစိုးရိမ်စိတ်တွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါ, ပေမယ့်), သင့်လိင်တူချစ်သူအတှေးအပျြောအပါးနှင့်အတူထက်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်ဆက်နွယ်လိမ့်မည်။
သင်၌လိင်တူဆက်ဆံသူ OCD ရှိပါကလိင်နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများကို OCD မှဖြေကြားရန်တောင်းဆိုသည့်အနေဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်လိင်နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများကိုဖြေ ဆို၍ မရပါ။ ကျွန်ုပ်၏တောင်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် (Palm Beach County) ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်တွင် HOCD ကုသမှုကိုရှာဖွေနေသောလူများသည်မသိနိုင်လောက်အောင်သိရှိရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်အလုပ်များနေကြသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်သင်၏စစ်မှန်သောလိင်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိသောနည်းလမ်းမရှိပါ။ အကယ်၍ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြေရှင်းနည်းရှိလျှင်သင်ယခုရှာတွေ့လိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ OCD ရန်သင့် "စစ်မှန်သော" လိင်သက်သေပြစရာရည်ရွယ်ချက်လမ်း (ကအမြဲ "ဘာ ... လျှင်?" မေးပါလိမ့်မယ်နှင့် "သင်ဘယ်လိုသေချာဘို့သိလား ... ?" မေးခွန်းများကို) လည်းမရှိသောကြောင့်, သင့် HOCD ကုသမှုပန်းတိုင်အပေါ်အာရုံစိုက်ရမယ် အဆိုပါသံသယနှင့်အတူအသက်ရှင်ဖို့သင်ယူခြင်း၏။ တနည်းအားဖြင့်ကုသမှုကိုသင်ဖြောင့်သို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူတွေဟာမဟုတ်ဘဲ unknowable သည်းညည်းခံနေ သာ. ကောင်း၏ကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးအာရုံစိုက်ဖြစ်စေမ "သက်သေ" ပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်မရသင့်ပါတယ်။ ပိုငျသညျသင်မသိလိုက်သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေအားဖြည့်ရန်ဖြစ်ကြောင်းပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်, "အမှန်တရားထုတ်တွက်ဆ" ရန်ကြိုးစားသင်တို့၏အကြံအစည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: HOCD ရုံသန့်စင်သောအို OCD ၏အခြားဗားရှင်းနဲ့တူလုပ်ကိုင်ဆိုတာသတိရပါ။
သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုလျှော့ချမှုအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာအပေါ်အခြေခံပြီးလိမ့်မည် ထိတွေ့မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေး HOCD သည်။ HOCD များအတွက်ထိတွေ့ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရည်ရွယ်ချက်သင်ရှောင်ရှားအခြေအနေများထုတ်ရှာကြံပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်ထုံးတမ်းခုခံတဝိုက်တည်ဆောက်လျက်ရှိကြ၏။ အကောင်းတစ်ဦးထိတွေ့မှုအဆင့်ဆင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲရှုပ်ထွေးဖြစ်, ဒါကြောင့်သင်လမ်းပြကောင်းတစ်ဦး HOCD ကုထုံးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်, သင့် HOCD ကုထုံးသည်လည်းသင်တို့ကိုမသေချာမရေရာနှင့်အတူအသက်ရှင်ဖို့သင်ယူခြင်း၏ရည်မှန်းချက်အတွက်တသမတ်တည်းနေဖို့ကူညီပေးပါမည်။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းတစ်ချိန်ကအပေါင်းတို့နှင့်အဘို့သင့်လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့သက်သေပြဖို့ကြိုးစားနေအချိန်သိသိသာသာပမာဏကုန်ရပြီသောကြောင့်, ပြန်ဒီအကူအညီမရပါရည်မှန်းချက်သို့ရောကျဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
သငျသညျအလားအလာကုသတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းနေနှင့်တဦးတည်းကိုသူတို့ "သင်၏လိင်တူချစ်သူအတှေးအသင်ကိုပျောက်ကင်းစေ" သို့မဟုတ်သင် "သင်သည်ဖြောင့်နေသေချာဘို့အသိရကြ" ကူညီပေးနိုင်ပါသည်အကြံပြုလိုလျှင်, ဒီအနီရောင်အလံစဉ်းစားပါ။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦး HOCD အထူးကုမဟုတ်ပါဘူး။ ကတိတော်များကိုဤအမြိုးအစား HOCD ကုသမှုအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပုံကိုထိရောက်သောနှင့်အတူကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်။ HOCD နှင့်အတူလူတိုင်းကသူတို့လိင်တူချစ်သူအတွေးများကိုဖယ်ရှားပစ်ရလိုလားသော်လည်း, ဖိနှိပ်မှုနည်းစနစ်ဖြစ်ပြီးရေရှည်အတွက်ထိရောက်မှုရှိလိမ့်မည်ထင်။
အဘယ်ကြောင့်နားလည်ရန်, ဒါမှမဟုတ်ငါ့အတောင်ဖလော်ရီဒါ (Palm Beach တွင်) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်၌ငါ့ယေဘုယျကုသမှုချဉ်းကပ်မှုအကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုဖို့, အပေါ်မှာငါ့ပို့စ်များကိုကြည့်ရှု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ obsessive, ထိန်းချုပ်မှုထင် နှင့် ဖိနှိပ်မှုထင်။ HOCD လက္ခဏာတွေကျော်လွှားခြင်းခက်ခဲအလုပ်လိုအပ်သော်လည်းလူတွေနေ့တိုင်း OCD ၏ဤစိန်ခေါ်မှုပုံစံကနေပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
မေးခွန်းလွှာ? မှတ်ချက်များ? HOCD သို့မဟုတ်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်စွဲနှင့်အတူ Living? အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောချွတ်အသံ။